Cabdi Barre "madaxweynaha in Beesha Caalamka kursiga ka deg tiraahdaa dhici karta" Dhageyso.
Thursday November 27, 2014 - 11:09:35 in Wararka by
Midka mid ah xildhibaanada taageersan Ra'iisalwasaare Cabdi-weli Sheekh Axmed ayaa sheegay in ay ka baqdin qaban in mooshinkii ra'iisalwasaaraha ka dhan ahaa dib loo soo celiyo taasina ay xubnaha maarlamaanka ee iminkaba labada garab u kala
Midka mid ah xildhibaanada taageersan Ra'iisalwasaare Cabdi-weli Sheekh Axmed ayaa sheegay in ay ka baqdin qaban in mooshinkii ra'iisalwasaaraha ka dhan ahaa dib loo soo celiyo taasina ay xubnaha maarlamaanka ee iminkaba labada garab u kala jabay sii kala fogeyso.
Xildhibaan Cabdi Barre oo ay wareysatay xalay Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan ayaa shaaciyay in ay ay saadaalinayaan haddii habkaan howshu ku socato in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aakhirka kurisgiisa waayi doono.
wuxuu sheegay in gaalada dalka haysataa inta u yeerto oron doonto kursiga ak deg.
xildhibaanka ayaa qiray in awoodda ciidan dalka joogta ay tahay mid shisheeye taasina ay sahleyso in dowladdu noqoto mid wax loo yeeriyo.
34 kun oo ruux ayaa caalamka ugu dhimatay Cudurka Carona Virus.
Ku dhowaad 10 kun oo qof ayaa caalamka ugu dhintay Carona Virus.